Madaxweyne Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii koowaad ee Adduunka ay boqortooyadii Cusmaaniyiintu | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii...
Madaxweyne Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii koowaad ee Adduunka ay boqortooyadii Cusmaaniyiintu
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Sabtidii maanta xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii dagaalkii koowaad ee Adduunka ay boqortooyadii Cusmaaniyiintu ka gaysatay dalka Armenia.
Aqoonsiga Madaxweyne Biden ayaa ah fulinta balanqaadkii ololahiisa doorashada, waxuuna ku soo beegmay maalinta xusuusta xasuuqii Armenia, taas oo laga xuso dalka Armenia, sidoo kale qurba joogta reer Armenia xusa.
Wasiirka Arimaha Dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in aqqoonsiga Biden uu dhaawici doono xiriirka ka dhaxeeya xulafada NATO. Cavusoglu ayaa Sabtidii ku sheegay qoraal uu soo saaray in aqqoonsiga Biden “uu qalloocinayo xaqiiqooyinka taariikheed, taas oo aysan dadka Turkigu waligood aqbali doonin, wuxuuna furi doonaa nabar qotodheer oo wiiqaya is aaminaadeenna iyo saaxiibtinimadeenna.”
“Waxaan ugu baaqeynaa Madaxweynaha Mareykanka in uu saxo qaladkan weyn, oo aan laheyn wax ujeeddo ah marka laga reebo qancinta kooxo siyaasadeed, iyo in uu taageero dadaallada ujeedkoodu yahay in la abuuro dhaqan ay si nabad ah gobolka loogu wada noolaado, gaar ahaan qowmiyadaha Turkida iyo Armenia, intii uu u adeegi lahaa ajandaha kooxahaas isku dayaya in ay cadaawad ka abuuraan taariikhda,”ayuu Cavusoglu ku daray.
Taariikhyahannada ayaa sheega in dad lagu qiyaasay 1.5 milyan oo reer Armenia ah ay ku dhinteen gacanta Boqortooyadii Cusmaaniyiinta intii u dhaxeysay 1915 iyo 1923-kii.
Turkiga ayaa meesha ka saara inuu jiray xasuuq iyo qorshe kasto oo si ula kac ah loogu ciribtirayo Armenia. Waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dhibbanayaashu ay ku dhinteen dagaalka ama ay dileen Ruushku. Turkiga ayaa sidoo kale sheegaya in tirada dadka reer Armenia ee la dilay ay aad uga yar tahay tirada inta badan la isla wada oggol yahay ee gaareysa 1.5 milyan.
Previous articleIndonesia oo xaqiijisay in uu degay markab Gujis ah oo la lala’aa maalmahaan.
Next articleGuddoomiyihii deegaanka Leego iyo qaar ka mid ah Ciidamadiisa oo goor dhawayd la laayay
Warar hordhac ah ayaa ka soo baxaya dagaal saakay mar kale ka Qarxay Gobolka Gedo oo u dhaxeeya Ciidamada Dowlada iyo Maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku...
Wasaaradda Arrimaha gudaha Afghanistan oo sheegtay in Daalibaan dishay...
Wasiiro ka tirsan koonfur galbeed oo ka qeybgalay aaska laba...